Banyere Anyị - Dị ka valvụ (Tianjin) Co., Ltd
Dị ka valvụ (Tianjin) Co., Ltd locates na Tianjin - kasị ike aku na uba na ebe ugwu China. Dị ka valvụ bụ a elu-ọgwụgwụ valvụ ngwaahịa n'ichepụta ụlọ ọrụ nke nwere imewe nnyocha na mmepe, n'ichepụta, ahịa ọrụ na otu. Anyị nwere Independent R & D center, elu n'ichepụta technology na nditịm mejuputa atumatu mkpa mba ụkpụrụ. Na elu engineering imewe-eru nso, na-mepụtara n'ichepụta ngwá, ule nkwenye ụlọ ọrụ na echiche nke dabere mmepụta, anyị "Dị ka valvụ" hụ na onye ọ bụla akụkụ ọ bụla ngwaahịa anyị Tụkwasịnụ bụ na elu àgwà na arụmọrụ.
The quality nkwa na-abịa site management nke ọ bụla zuru ezu. Ebe ọ bụ na ya guzosiri ike, ụlọ ọrụ enweela kọmputa-aided imewe, dị ka CAD na Solid ọrụ, na-akpa na-ịme elu Six Sigma management. Guzosie Ike a set of echesinụ quality management usoro, na-Iji na-agbaso efu nkwarụ ngwaahịa. Anyị ipuiche urukurubụba valvụ, n'ọnụ ụzọ ámá valvụ, ụwa valvụ, ego valvụ, bọl valvụ, haịdrọlik akara valvụ, guzozie valvụ na ndị ọzọ na usoro ngwaahịa. Ọ na-arụpụta ụlọ valves na dị iche iche ihe, nrụgide, size na ndị ọzọ na ngwaahịa, e nwere ihe karịrị 50 usoro, ihe karịrị 1200 iche.
Dị ka valvụ (Tianjin) Co., Ltd
quality nkwa usoro
Kwa afọ mmepụta ike nke ihe karịrị mmadụ 6,000 tọn. Products kpuchie n'akụkụ nile nke mba ahụ na-exported na Europe na United States na obodo ndị ọzọ, ọtụtụ-eji mmiri na drainage, ewu, ọkụ eletrik, Petrochemical, Metallurgical na ndị ọzọ ọrụ. Product nka, elu àgwà na ihe ezi uche price, tụkwasịrị obi site onye ọrụ.
Anyị gafere ISO9001 mba quality usoro asambodo, ka valvụ nwere magburu onwe buru ibu ma na-ajụ-sized igwe nhazi akụrụngwa 178 tent, 32 tent nke nnyocha akụrụngwa dị site ná mba ọzọ. Product imewe akwụkwọ, elu Ọdịdị, ikenyeneke mbiet mmepụta technology, dabere mmepụta, zuru nchọpụta. The akara nke echesinụ quality nkwa usoro na management usoro, anyị eruwo a elu nke imewe, mmepe, n'ichepụta na nnyocha ule. Strong mmepụta ike na-eme ka "Dị ka valvụ" na nke kasị nso-ekwe omume oge inye ndị na ngwaahịa, na-enye Bịara n'Ezi Oge na oru oma mgbe-sales ozi nweta kacha ahịa afọ ojuju.
The n'ọdịnihu ga-wuru si taa, ka valvụ ga-mbụ na klas na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ, akpa-ozi klas, toop quality entrepreneurial spirit isonye na n'ọdịnihu e kere eke. Na àgwà nke ngwaahịa na ahịa afọ ojuju na-enwe mmetụta anyị azụmahịa anyị Company, na unremitting achụ nke na-adịgide development n'ofè anyị onwe anyị. "Likv nrọ" ga-eme ka "Chinese nrọ" ihe na-akpali akpali!
Uru na ọghọm dị iche iche v ...
Report: Innovative ọhụrụ n'ibu jikọọ ...